फेसियल हाउस स्थापनाको १४ औं वर्षमा प्रवेश | रेडियो झापा 100.7 MHz.
फेसियल हाउस स्थापनाको १४ औं वर्षमा प्रवेश
रेडियो झापा 100.7 MHz. आइतबार, पौष ११, २०७८ ११:३६:४०
यो गुणस्तरीय सौन्दर्य प्रसाधन मात्र प्रयोग गरिने भएकाले सबैको रोजाईमा पर्न सकेको हो । अनुभवी तथा दक्ष सौन्दर्यकर्मीबाट तालिम पनि प्रदान गरिने यो ब्युटिपार्लरका सेवामध्ये मेकअप तथा फेसियल धेरैले मन पराएका छन् । यहाँ गरिने हेयर स्ट्रेट र हेयर कलर पनि लामो समयसम्म टिक्ने हुन्छ । फेसियल हाउसले चाडपर्वको अवसर पारेर ग्राहकहरूलाई विभिन्न सुविधा प्रदान गर्दै आईरहेको छ । यो सफा एवं सुन्दर वातावरणमा आरामदायक सेवाका लागि विश्वासिलो पार्लर हो । १४ बर्षको कलिलो उमेरमा नै यसले नेपालका विभिन्न ठाउँमा आफ्नो शाखा बिस्तार गरिरहेको छ । यसैबाट पनि फेसियल हाउसको लोकप्रियतालाई बुझ्न सकिन्छ ।
फेसियल हाउसकी संचालक सुषमा महराको सभापतित्वमा संचालन भएको उक्त कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी निर्वतमान अध्यक्ष भवानी राणाको उपस्थिति रहेको थियो । त्यस्तै अतिथिहरु महिला चेम्बरको सभापति उर्मिला श्रेष्ठ, सामाजिक अनुसंधानकर्ता एवं लेखक अन्जु शाह सिंह, विद्युत नियमन आयोगको अध्यक्ष डिल्ली बहादुर सिंह , नायकद्धय दिकपाल कार्की र यशराज गराच , हास्य कलाकार माधब त्रिपाठी , गायक गायिका , अन्य कलाकार , साहित्यकार र पत्रकारहरुको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो । उनीहरुले एक साथ केक काट्दै फेसियल हाउसलाई शुभकामना दिएका छन् । कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य राख्दै अटो पत्रकार संघका अध्यक्ष तथा कर्पोरेट खबरका संचालक उज्वल जंग शाहले ब्यवसायमुखी नभई सेवामुखी धारणाले सेवा दिँदै गर्दा फेसियल हाउसले एकै ठाउँबाट एकै चोटि ६० जना भन्दा बढीलाई ब्यूटि पार्लरको सर्भिस दिन सकिने जानकारी दिएका छन् । उनले अब फेसियल हाउसमा घन्टौं लगाएर पालो कुर्न नपर्ने गरि छिटो र सरल तरिकाले गुणस्तरीय सेवा दिन सकिने बताएका छन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै भवानी राणाले कोभिड १९ को महामारीमा कयौं अर्थतन्त्र , उद्योग र व्यापार व्यवसाय थलिएका छन् तर यस्तो बेलामा फेसियल हाउस प्रगतिको पथमा लम्किदै छ । एक पछि अर्को वसन्त पार गर्दै भर्र्याङ चढ्दैछ र विभिन्न ठाउँमा शाखा बिस्तार गर्दै छ, यो निकै नै ठूलो कुरा रहेको बताइन् । उनले शुषमा महराको मुहारमा आएको सफलताको चमक सधै रहिरहोस् भन्दै फेसियल हाउसलाई शुभकामना दिएकी छन् । उनले परिवारको साथ र सहयोग भएमा कुनै पनि काम सहि ढंगले सम्पन्न हुन सक्ने र उदाहरणको लागि उज्वल जंग शाह र सुषमा महराको जोडिलाई लिन सकिने बताएकी छिन् । उनले फेसियल हाउसले सौन्दर्य सम्बन्धि सेवा दिनुका साथसाथै सन्देशमुलुक र जानकारीमुलक सुझाव सल्लाह दिने गरेकोमा खुसि लागेको बताइन् । राणाले फेसियल हाउसले धेरैलाई रोजगारि दिएको र अर्थतन्त्र उकास्न महिलाको सहभागिता उत्कृष्ट रहेको बताइन् । उनले फेसियल हाउसले नेपालमा मात्र नभएर बिदेशमा पनि शाखा बिस्तार गर्न सकोस् भन्ने कामना गरेकी छिन् ।
कार्यक्रममा निर्देशक शोभित बस्नेतले फेसियल हाउसले कलाकारलाई दिएको ईज्जत र साथ सहयोगको खुलेर प्रशम्सा गर्नु पर्ने वताएका छन् । उनले कुनै पनि बेला फेसियल हाउसलाई चाहेको खण्डमा सहयोग गर्ने जानकारी दिएका छन् । नायिका पुजा शर्माले फेसियल हाउसले आफ्नो खुसिको समयमा कलाकारलाई सम्झिएकोले धेरै नै खुसी लागेको बताएकी छिन् । उनले फेसियल हाउसलाई पहिलादेखी नै हेर्दै र बुझ्दै आईरहेको र यतिबेला फेसियल हाउसले गरेको उन्नति र प्रगति हेर्ने मात्र नभएर यसले गरेको भित्री संघर्ष पनि महसुस भएको बताइन् । उनले कुनै पनि संस्था १ बर्ष टिकाउन त गाह्रो हुन्छ तर फेसियल हाउसले १४ वर्षसम्म टिकाउन सफल भएको र अझै यसको आयु बढ्दै जाओस् भन्दै फेसियल हाउसलाई धेरै धेरै बधाई र शुभकामना दिएकी छिन् । फेसियल हाउसकी संचालक सुषमा महराले अहिले आफ्नो शाखा काठमाडौैं भित्र ३ वटा र मोेफसलमा २ वटा शाखा संचालनमा रहेको जानकारि गराएकी छिन् ।
उनले जताततै ब्यूटि पार्लर खुलिरहेका छन् । काठमाडौ मलमा मात्रै दुई दर्जन भन्दा बढी पार्लर संचालनमा आएका छन् । आफू सङ्ग प्रतिस्पर्धामा आएकाले आफूलाई खुसि लागेको र जति धेरै प्रतिस्पर्धा हुन्छ त्यतिनै काम गर्न अझ हौसला मिल्ने र उर्जा थपिने भएकाले जस्तोसुकै चुनौती पनि पार गर्न तयार भएर नै फेसियल हाउसलाई नयाँ ढाँचामा लैजादै गरेको बताइन् । उनले फेसियल हाउसको स्वरुप परिवर्तन भएता पनि सेवा र सुबिधामा सबैभन्दा गुणस्तरीय र अब्बल रहेको बताएकी छिन् । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथ ,अतिथि र कलाकारहरुले आआफ्नो तर्फबाट मन्तव्य राख्नुका साथै कलाकारहरुले आफ्नो कलाकारिता प्रस्तुत गरेका थिए ।
उनिहरुलाई फेसियल हाउसको तर्फबाट मायाको चिनो प्रदान गरिएको थियो । नेपालकै नम्बर वान ब्यूटी पार्लरकोे अवार्ड समेत जित्न सफल भएको यस फेसियल हाउसले सदाझैँ यसपाली पनि कर्मचारी हरुलाई बेस्ट अवार्ड , प्रमाणपत्र र मायाको चिनो वितरण गरेको थियो । कार्यक्रममा फेसियल हाउसका कर्मचारीले र कलाकारहरुको प्रस्तुतिमा नाचगाना गरेका थिए। हास्य कलाकार माधव त्रिपाठीको जादु र ठट्यौलीले कार्यक्रम अझै रोचक भएको थियो । कार्यक्रमको सहजीकरण दिपज्योती थापाले गरेकी थिइन् ।